Fanaraha-maso ny fepetra famokarana zezika biolojika, amin'ny fampiharana, dia ny fifandraisan'ny fananana ara-batana sy biolojika amin'ny fizotry ny fananganana kompos. Amin'ny lafiny iray, ny fepetra fanaraha-maso dia mifangaro sy mifandrindra. Etsy ankilany, ny windrows samihafa dia mifangaro, noho ny natiora isan-karazany sy ny hafainganam-pandehan'ny fahasamihafana.
Fanaraha-maso ny hamandoana
Ny hamandoana dia takiana lehibe ilaina zezika voajanahary. Amin'ny fizotry ny zezika zezika, ny atin'ny hamandoan'ny akora tany am-boalohany dia 40% ka hatramin'ny 70%, izay miantoka ny fandrosoan'ny composting. Ny atin'ny hamandoana mety indrindra dia 60-70%. Ny votoatin'ny hamandoana avo loatra na ambany loatra dia mety hisy fiatraikany amin'ny asan'ny aerobe ka tokony ho tanterahina ny fitsipi-pitantanana alohan'ny fanamasinana. Rehefa latsaky ny 60% ny hamandoana ara-nofo dia miakatra miadana tsikelikely ny mari-pana ary ambany ny mari-pahaizana momba ny lo. Rehefa mihoatra ny 70% ny hamandoana dia voasakana ny rivotra ary hamboarina ny fermentation anaerobic izay tsy mahomby amin'ny fivoaran'ny fermentation iray manontolo.
Ny fanadihadiana dia naneho fa ny fampitomboana ny hamandoana amin'ny akora ara-dalàna dia mety hampandeha ny fahamatoran'ny zezika sy ny fitoniana. Ny hamandoana dia tokony hitazona 50-60% amin'ny dingana voalohan'ny composting ary avy eo dia tokony hotehirizina 40% ka 50%. Ny hamandoana dia tokony fehezina ambanin'ny 30% aorian'ny fanaovana compost. Raha avo ny hamandoana dia tokony ho maina amin'ny hafanan'ny 80.
Vokatry ny hetsika mikraoba, izay mamaritra ny fifandraisan'ny fitaovana. Rehefa 30 ~ 50 ℃ ny mari-pana voalohany amin'ny fananganana zezika, ny zavamiaina bitika thermophilic dia afaka manimba zavatra organika be dia be ary mamoaka haingana ny cellulose ao anatin'ny fotoana fohy, ka mampiroborobo ny mari-pana amin'ny antontam-bato. Ny mari-pana optimum dia 55 ~ 60 ℃. Ny mari-pana ambony dia fepetra ilaina hamonoana ireo otrikaretina, atody bibikely, voa ahidratsy ary zavatra misy poizina sy manimba hafa. Amin'ny 55 ℃, 65 ℃ sy 70 ℃ maripana ambony mandritra ny ora vitsivitsy dia mety hamono zavatra manimba. Matetika dia maharitra roa na telo herinandro amin'ny mari-pana mahazatra.
Nolazainay fa ny hamandoana dia singa iray misy fiatraikany amin'ny hafanan'ny zezika. Ny hamandoana be loatra dia hampidina ny mari-pana ny zezika, ary ny fanitsiana ny hamandoana dia mahasoa amin'ny fiakaran'ny maripana amin'ny dingana fanamasinana any aoriana. Ny mari-pana dia azo ampidinina amin'ny alàlan'ny fametahana hamandoana fanampiny.
Ny famadihana ny antontam-bato dia fomba iray hafa hifehezana ny mari-pana. Amin'ny alàlan'ny famadihana ny antontam-bato, ny mari-pana amin'ny antontam-bokatra dia azo fehezina amin'ny fomba mahomby, ary ny fihenan'ny rano sy ny tahan'ny rivotra dia afaka hanafaingana. nymilina fanodinana compost dia fomba mandaitra hahitana ny fanamasinana fotoana fohy. Izy io dia manana ny mampiavaka ny fandidiana tsotra, ny vidiny mirary ary ny fahombiazana tena tsara. Ny cmilina ompost turner afaka mifehy tsara ny mari-pana sy ny fotoana fanamasinana.
C / N fanaraha-maso tahan'ny.
Ny tahan'ny C / N mety dia afaka mampiroborobo ny fanamasinana malefaka. Raha avo loatra ny tahan'ny C / N, noho ny tsy fisian'ny azota ary ny fetran'ny fivoaran'ny tontolo iainana, dia miadana ny tahan'ny fahasimban'ny zavatra biolojika, mahatonga ny cycle compost ho lava kokoa. Raha ambany loatra ny tahan'ny C / N dia azo ampiasaina tanteraka ny karbaona, ary ny nitroka tafahoatra dia mety ho very toy ny amoniaka. Tsy miantraika amin'ny tontolo iainana fotsiny izany fa mampihena ny fahombiazan'ny zezika azota. Ny zavamiaina bitika dia mamorona protoplasm mikraoba mandritra ny fanamasinana organika. Protoplasm dia misy karbaona 50%, azota 5% ary asidra phosoratika 25%. Manome soso-kevitra ireo mpikaroka fa ny tahan'ny C / N mety dia 20-30%.
Ny tahan'ny C / N an'ny zezika voajanahary dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny fampidirana fitaovana avo C na avo N. Ny fitaovana sasany, toy ny mololo, tsimparifary, sampana ary ravina, dia misy fibre, lignin ary pectin. Noho ny atin'ny gazy / azota avo lenta, dia azo ampiasaina ho toy ny aditifa avo lenta izy io. Ny zezika amin'ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona dia be azota ary azo ampiasaina ho toy ny aditif azota avo. Ohatra, ny tahan'ny fampiasana ny azota amoniaka amin'ny zezika kisoa ho an'ny zavamiaina bitika dia 80%, izay afaka mampiroborobo ny fitomboana sy ny famokarana zavamiaina bitika ary manafaingana ny zezika.
ny milina granulation zezika biolojika vaovao dia mety amin'ity dingana ity. Ny additives dia azo ampiana amin'ny takiana samihafa rehefa miditra ao amin'ilay masinina ny akora.
A, ir-famoahana ary ny famatsiana oksizenina.
Ho an'ny fermentation ny zezika, zava-dehibe ny fananana rivotra sy oksizena ampy. Ny asany lehibe indrindra dia ny fanomezana oksizenina ilaina amin'ny fitomboan'ny zavamiaina bitika. Ny mari-pana ambony indrindra sy ny fotoana anaovana compost dia azo fehezina amin'ny alàlan'ny fanitsiana ny mari-pana amin'ny antontam-be amin'ny alàlan'ny fikorianan'ny rivotra madio. Ny fitomboan'ny rivotra dia afaka manaisotra ny hamandoana ary mitazona ny toetr'andro mety indrindra. Ny rivotra sy ny oxygen azo atao tsara dia afaka mampihena ny fatiantoka azota sy ny famokarana fofona avy amin'ny zezika.
Ny hamandoan'ny zezika biolojika dia misy fiatraikany amin'ny fifindran'ny rivotra, ny fiasa mikraoba ary ny fanjifana oksizenina. Io no singa fototrafananganana aerôbika. Mila mifehy ny hamandoana sy ny rivotra isika, arakaraka ny toetoetran'ilay fitaovana hahazoana ny fandrindrana ny hamandoana sy ny oxygen. Mandritra izany fotoana izany, ny roa amin'izy ireo dia afaka mampiroborobo ny fitomboana sy ny famokarana zavamiaina bitika ary manatsara ny fivoaran'ny fermentation.
Nasehon'ny fandinihana fa mampiseho fa ny fihinanana oksizenina dia mitombo mihena latsaka ny 60 ℃, mitombo miadana mihoatra ny 60 ℃, ary manakaiky ny aotra mihoatra ny 70 ℃. Ny rivotra sy ny oxygen dia tokony ahitsy arakaraka ny mari-pana isan-karazany.
Ny sanda pH dia misy fiantraikany amin'ny fizotran'ny fermentation manontolo. Amin'ny dingana voalohany amin'ny composting, ny pH dia hisy fiantraikany amin'ny asan'ny bakteria. Ohatra, ny pH = 6.0 no teboka mitsikera ny zezika kisoa sy ny famoahana. Manakana ny famokarana gazy karbonika sy ny hafanana amin'ny pH <6.0. Amin'ny pH> 6.0, ny dioksidan'ny karbôna sy ny hafany dia mitombo haingana. Amin'ny dingan'ny mari-pana ambony, ny fitambaran'ny pH avo sy ny mari-pana ambony dia miteraka volatilization amoniaka. Ny mikraoba dia lo amin'ny asidra organika amin'ny alàlan'ny kompost, izay mampihena ny pH hatramin'ny 5.0. Ny asidra organika miovaova dia mihena rehefa miakatra ny mari-pana. Mandritra izany fotoana izany, ny fikaohin'ny amoniaka amin'ny zavatra biolojika dia mampitombo ny sandan'ny pH. Amin'ny farany, miorina amin'ny ambaratonga avo kokoa izy io. Ny tahan'ny zezika farany ambony indrindra dia azo tratrarina amin'ny mari-pana amin'ny composting avo kokoa miaraka amin'ny sanda pH manomboka amin'ny 7,5 ka hatramin'ny 8,5. Ny pH avo dia mety miteraka volatilization amônônia be loatra koa, noho izany ny PH dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fampidirana asidra alum sy phosoratika.
Raha fintinina, tsy mora ny mifehy ny mahomby sy feno fanamasinana ireo akora biolojika. Ho an'ny singa tokana dia mora izany. Na izany aza, ny fitaovana samihafa dia mifanerasera ary mifanakana. Raha te-hahatsapa ny fanatsarana ankapobeny ny fepetra fanaovana zezika, ilaina ny fiaraha-miasa amin'ny dingana tsirairay. Rehefa mety ny fepetra fanaraha-maso dia afaka mandeha am-pilaminana ny fermentation, amin'izay mametraka ny fototra ho an'ny famokaranazezika biolojika avo lenta.